समयसापेक्ष बनाउन प्रेस काउन्सिल ऐन संशोधन हुँदै, स्वतन्त्र र उत्तरदायी पत्रकारिताको विकास ! | Seto Khabar
समयसापेक्ष बनाउन प्रेस काउन्सिल ऐन संशोधन हुँदै, स्वतन्त्र र उत्तरदायी पत्रकारिताको विकास !
काठमाडौँ , जेठ । पत्रकारिताको पेशागत उच्चतम आचरण कायम राखी स्वस्थ, स्वतन्त्र र उत्तरदायी पत्रकारिताको विकास तथा संवद्र्धनका लागि गठित प्रेस काउन्सिल ऐन समयसापेक्ष संशोधन हुँदैछ । २०४८ सालमा काउन्सिलसम्बन्धी जारी ऐन छापामाध्यममा केन्द्रित भएको भन्दै त्यसलाई समयसापेक्ष संशोधन गर्न लागिएको काउन्सिलले जनाएको छ ।
काउन्सिलले संशोधित ऐन सञ्चार तथा सुचना प्रविधि मन्त्रालयमा पेश गरेको छ । मन्त्रालयले आवश्यक अध्ययन र संशोधनपछि त्यसलाई संघीय संसद्मा पेश गरी पास गर्ने जनाइएको छ । –कुमार चौलागाई, रासस